ရုရှား AUSLOGICS DISK ကိုကို DEFRAG အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
Auslogics Disk ကိုကို Defrag 8.0.9.0
မိုဘိုင်းပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်ဆုံးမဩဝါဒပေးခွင့်ပြုမယ်လို့တစ်ကယ့်ကိုကျိုးနပ် application ကိုတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, အဘိဓါနျသို့မဟုတ်စမ်းသပ်မှုတာဝန်များကိုစုဆောင်း, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသုံးပြီးအသစ်သောအသိပညာရရှိရန်မဖြစ်နိုင်သလောက်ပင်ဖြစ်သည်ဘယ်မှာအများအပြား applications များရှိပါသည်။ အသုံးပြုမှုအတွက်အင်္ဂလိပ် Grammar ဤအစီအစဉ်နှင့်အတူ, တကအလယ်အလတ်အဆင့်မှာအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါဆုံးမဩဝါဒ ပေး. တတ်နိုင်သမျှဖြစ်လိမ့်မည်ဟုထေူ၏။ ဒီ app ကိုဒါကောင်းသောဖြစ်ပြီး, တကယ့်အချိန်ကာလနှင့်ပိုပြီးလေ့လာသင်ယူရန်ကူညီပေးသည်ရှိမရှိအဘယ်အရာကိုကြည့်ကြရအောင်။
အဖြစ်မကြာမီသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် program ကို install အဖြစ် menu ကိုမှာကြည့်လိုက်ပါ။ ဒီနေရာတွင်မကြာခဏသင်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ကြုံတွေ့နေကြသည်သောစကားဟူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာကျဉ်းမြောင်းစွာအာရုံစိုက်အကြောင်းအရာများ၏အဘိဓါနျတစျမြိုးပါပဲ။ ဒီ menu ကိုရိုက်ထည့်ဖို့အကြံပြုနှင့်မရှင်းလင်းကြောင်းသင်ခန်းစာ၏ကျမ်းပိုဒ်စဉ်အတွင်းသောဖြစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့အသုံးအနှုန်းအပေါ်ကိုနှိပ်ခြင်း, အသုံးပြုသူသူ့ကိုအကြောင်းကိုအားလုံးလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံ, သူသည်ဤစကားများအားအသုံးပြုကြသည်ရှိရာယူနစ်, ကြည့်ရှုရန်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ကို manual ကျောင်းသားဤအစီအစဉ်အတွက်လေ့လာသင်ယူတံ့သောသဒ်ဒါပေါငျးတို့သအကြောင်းအရာများ, ကိုပြသပါလိမ့်မယ်။ သင်တန်းစတင်ခင်မှာ, အသုံးပြုသူလေ့လာမှု၏ယူနစ်ကိုမြင်ရဖို့မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းသူကအပေါ်ကိုတက်တိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်အဘယ်အရာကိုမိမိအဘို့ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဒီမီနူးကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်တိကျတဲ့ခေါင်းစဉ်ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်ဤနည်းဥပဒေဒါမှမဟုတ်အခန်းအောက်မှာအကြိမ်ကြိမ်စစ်ဆေးမှုများကိုပါအောင်မြင်မှရာပူဇော်သက္ကာကို, ဖွင့်လှစ်။ ထိုသို့အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ၏သိကျွမ်းခြင်း၌အားနည်းချက်များကိုနှင့်အားသာချက်များကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤအစမ်းသပ်မှုဖြတ်သန်းပြီးနောက်လေ့ကျင့်ရေးသွားပါ။
မြေတပြင်လုံးလေ့ကျင့်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလုပ်ကွက်များသို့မဟုတ်ကဏ္ဍများကိုခွဲခြားသည်။ ကပ်ကာလ၏ခြောက်လကဏ္ဍများ «အတိတ်» နှင့် «ပြီးပြည့်စုံသော» အဆိုပါအစီအစဉ်၏စမ်းသပ်မှုဗားရှင်းရရှိနိုင်ပါသည်။ အသုံးပြုမှုအတွက်အင်္ဂလိပ် Grammar အလုပ်အကိုင်အဖို့သင့်လျော်သောချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူအလယ်မှာအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား၏သဒ္ဒါသို့မဟုတ်ပင်အဆင့်မြင့်လေ့လာသင်ယူရန်ကူညီပေးပါမည်သမျှသောအဓိကအကြောင်းအရာများရှိပါတယ်။
တစ်ခုချင်းစီကိုယူနစ် (ယူနစ်) အတန်းခွဲခြားထားပါသည်။ အစပိုင်းမှာကျောင်းသားဤသင်ခန်းစာတွင်စူးစမ်းပါလိမ့်မည်တဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ရရှိသည်။ Next ကို, သင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ခြွင်းချက်လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရာအားလုံးပင်အင်္ဂလိပ်လိုအရင်ကဆိုရင်များအတွက်ခေတ္တမျှနှင့်နားလည်ရှင်းလင်းထားပါသည်။ သင်ကွေညာသူမှသက်ဆိုင်ရာ icon ကို click နိုင်ပါတယ်လိုအပ်သောလျှင်, သင်ခန်းစာနားလည်နိုင်သောကမ်းလှမ်းမှုကိုကပြောသည်။
တစ်ဦးချင်းစီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာဆွေးနွေးပြီးနောက်, သင်စမ်းသပ်မှု, လေ့လာမှုပစ္စည်းပေါ်တွင်အခြေခံထားသည့်အလုပ်များကိုမတယောအရေအတွက်ကိုလွန်သွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့ကူညီခြင်းနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုသင်ယူဖို့တစ်ချိန်ကပိုပြီးလေ့လာသင်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင်ကကမ်းလှမ်းမှုကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ဤကိစ္စတွင်၌တရားတည်းဟူသောအများအပြားအဆိုပြုထားအဖြေတွေကိုတဦးရွေးချယ်ဖို့ကပိုမကြာခဏလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သင်ခန်းစာစာမျက်နှာပေါ်တွင်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးများအပြင်မကြာခဏလည်းလေ့လာသင်ယူရမည်ဖြစ်သည့်အပိုဆောင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေမှလင့်များပါရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ပထမဦးဆုံးပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက်တိုတောင်းတဲ့ပုံစံကိုတစ်ဦး link ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဓိက Lay-off, သူတို့ဘက်၌တရားရွေးချယ်စရာအဖြစ်ကတစ်ဦးအချို့သောစကားလုံးသို့မဟုတ်စာပိုဒ်တိုစကားပွောနိုငျရှိပါတယ်။
သင်ခန်းစာတွေကိုဆန့ ်. , ဒါပေမယ့်အသေးစိတ်ကြသည်မဟုတ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဘို့ပေးဆောင်မှသာ6လုပ်ကွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဤသူသည်ငါအသုံးပြုမှုအတွက်အင်္ဂလိပ် Grammar အကြောင်းကိုသင်ပြောပြချင်ပါတယ်သောသူအပေါင်းတို့သည်။ ယေဘုယျအား, ဒီအင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါ၏သင်တန်းကိုယူဖို့အတွက်ရေတိုအတွက်ကူညီပေးသည်သည့်မိုဘိုင်းကိရိယာပေါ်မှာအကြီးအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ပြီးပြည့်စုံသော။
အင်္ဂလိပ် Grammar အသုံးပြုမှုစမ်းသပ်အတွက် Download
ဗီဒီယို Watch: تحديث ببجي وتجربة ماب الليل PUBG MOBILE (နိုဝင်ဘာလ 2019).